Home AFRICAN STARS Nicolas Pepe Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Nicolas Pepe Childhood Story Plus Xogta Loo Baahan Yahay Xogta LB
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan "Nico". Nolosheena Nicolas Pepe Carthouse iyo Warqada Aan Bixin Karin Dhibaatooyinka Dhamaystiran waxay kuu keenaan xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda.
Nicolas Pepe Sheeko Carruurnimo - Waqtiga Carruusha ilaa Taariikhda. Ku darso FutWiz
Haa, qof walba waa ogyahay awooda uu ku heysto kooxo waa weyn oo yurub ah oo daciif ah wuxuuna ka baryayaa Knees. Si kastaba ha ahaatee, taageerayaal kubada cagta ah oo kaliya ayaa tixgelinaya Nicolas Pepe 'Biography' kaasoo ah mid xiiso leh. Hadda oo aan ado kale, aan bilowno.
Nicolas Pepe Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan ' Hore iyo Taariikhda Qoyska
Nicolas Pepe waxa uu ku dhashay maalintii 29th May May 1995 hooyadiis, aabe Papa Celestin oo ku taala Mantes-la Jolie commune oo ku taal waqooyiga dhexe ee Faransiiska. Hoos waxaa ku yaal sawirka waalidkiis; aabab aad u adag iyo hooyo qurux badan.
Nicolas Pepe Waalidiinta. Ku darso MondialSport
Nicolas Pepe waxa ay ka timaadaa bilaabashada mugdiga iyo asalka saboolka ah ee qoyska. Inkasta oo uu ku dhashay Faransiiska, laakiin waalidkiis ayaa ah dadka soo galootiga ah ee Ivory Coast ka soo guuray Ivory Coast ilaa Faransiiska bartamihii 1990s si loo raadsado nolol wanaagsan.
Marka la dejiyo Paris, waalidka Nicolas Pepe waa inay raadsadaan shaqooyin la heli karo. Aabahiis wuxuu Celestin qabtay shaqo ka mid ah Xabsigii Xabsiyada halka hooyadiis ay sii ahaan laheyd xannaaneeye. Waxay u dhashay Nico waxayna ku sara kiciyeen joornaalka Mantes-la Jolie. Xilliyadii hore, waalidkii Nicolas Pepe ayaa go'aansaday inuu u guuro Poitiers ee galbeedka Faransiiska ka dib markii aabe uu shaqo ka helay degaanka.
Nicolas Pepe Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan ' Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha
Kobaca Waqooyi-bari Paris, ma jirin alaabta caruurta lagu ciyaaro ama ciyaaraha. Dhamaan Nicolas waxay ahayd inuu kubad ku ciyaaro kubada cagta. Wuxuu had iyo jeer jecel yahay kubada cagta. Muhiimadda ugu weyn ee waxbarashadiisa ayaa timid markii uu jiray da'da 6. Tani waxay ahayd xilligii uu la kulmay macallinkiisa dugsiga isaga oo weydiistay ... "Nicolas, maxaad dooneysaa inaad nolosha ku sameyso?"
Nolol Pepe ee Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqo. Ku darso liistada liiska
Nicolas ku jawaabay; "Waxaan doonayaa inaan noqdo ciyaaryahan xirfad leh markaan kobcayo". Go'aankaan ayaa la yaabay macallinkiisa oo aan waligiis garanaynin Nico uu ahaa mid xoog leh oo go'aansaday inuu gaaro himiladiisa. Sidaas ayuu go'aansaday inuu ku caawiyo wiil yar.
Ka dib guusha Faransiiska ee ku aaddan 1998 World wuxuu arkay tiro aad u badan oo ah dadka soo galootiga Afrika ee ka qeyb galay kubada cagta. Nicolas ma ahayn mid ka reeban. Inkastoo uu sii waday waxbarashadiisa islamarkaana kubadda ku darsaday illaa uu sanadkaan dhalin yaro. Nico marna ma aheyn wax soo saarka akadeemiyad kasta oo loogu talagalay dadka bilowga ah ee da'doodu tahay 5-9.
Nicolas Pepe Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan ' Nolosha Mudnaanta Hore
Nicolas ayaa sii waday xamaasadiisii ​​kubada cagta markii uu arkay tijaabooyin iyo isqorista naadiga Faransiiska, Poitiers FC (oo haatan loo yaqaano Stade Poitevin). Kooxda kubada cagta ee kooxda ayaa xilli ciyaareedkii hore ku ciyaaray horyaalka shanaad ee Faransiiska.
Nicolas Pepe Sanadaha Sanadaha Hore. Deynta Ouest-France.
Markii uu ku biiray kooxda, qof waliba wuxuu ku dhacay kubadiisii ​​kubada. Inkastoo qaab ciyaareedkiisa cajiibka ah ee heerarka dhalinyarada, kooxda kubadda cagta ee ka jirta akadeemiyada waaweyn ayaa ka careysiisay Nicolas Pepe qaab ciyaareedkiisa baaxada leh iyo walwal uu ka qabo dabeecadiisa. Waxaa jiray fikrado ah in Nicolas uu ahaa mid aan ku habooneyn ama uu ahaa caajis xaalado gaar ah. Sababtaas darteed, qofna lama soo dhawaynin ama ku qanacsaneen.
Inkastoo ay ka mid yihiin boosaska kubbada cagta iyo qorayaasha kale, Pepe wuu ogaa waxa uu doonayo. Mar dambe ayuu qaab ciyaareedkiisa dib u helay markii uu si joogta ah ugu biiray kooxda koowaad.
Nicolas Pepe Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan ' Waddada loogu talagalay sheekada
Nicolas Pepe ayaa sii waday howlgalkii uu ku ahaa inuu gacan ka geysto sidii ay uga caawin lahaayeen Poitiers inay ku guuleystaan ​​guushii 3-1 taasoo ka dhigtay inay ka baxaan fasaxii 2012-2013. Guulahan noocan oo kale ah waxa uu ku soo bandhigay Angers, oo ah naadiga kubadda cagta ee ku yaal Western France.
Jaceylka Aragtida koowaad:
Tani waa isbedelka Nicolas Pepe guusha. Dhamaantood waxay ku dhaceen maalin qurux badan. Sida laga soo xigtay BleacherReports, waxay ahayd maalintii Isniintii Sporting Luis Campos uu arkay Nikolas intii uu ciyaarayay ciyaar uu ciyaaray.
Nicolas Pepe Road to Fame Story- Maalintii uu helay muuqaal. Deynta ku taala Fieldoo
Inkastoo xiddigii hore ee Real Madrid uu joogay si uu u eego ciyaaryahan ka soo horjeeda. Si kastaba ha ahaatee, laga soo bilaabo xilligaas waxa uu arkay Pepe, waxa uu indhaha ku hayay ciyaaryahan kale oo kubada cagta ah, xitaa xitaa himiladiisa oo uu u yimid inuu daawado. Tani "jaceylka Aragtida koowaad" waxaana sii xoogeystay markii Pepe uu gool dhaliyey daqiiqad cajiib ah 82nd.
"Waxaan si dhaqso ah u jeclaa isaga," Campos ayaa u sheegay website-ka French Football website. Ka dib markii uu arkay Pepe, wuxuu go'aansaday inuu u sheego milkiilaha cusub ee Lille inuu iibsado xiddiga Faransiiska ah ee reer Ivory Coast.
Nicolas Pepe Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan ' Kusoo sharax sheekada
Nicolas Pepe ayaa ku biiray kooxda Lille xagaagii 21st ee June 2017 ka dib markii amaah uu kula joogay kooxda Orléans. Dhowr bilood oo uu ku biiray kooxda, waxa uu qeyb ka noqday hanaanka dib u soo kabashada ee maamulka kooxda. Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 oo ay hogaanka ku heysay kooxda Lille.
Sidoo kale goolasha quruxda badan, Pepe ayaa muujiyay inuu sidoo kale yahay mid ka mid ah goolasha ugu fiican ee ka ciyaara qaaradda Yurub.
Shaki la'aan, waa markii ugu horreysay oo tan iyo tan Eden Hazard Chelsea ayaa ku biirtay 2012 taas oo Lille ay sheegan karto mid ka mid ah ciyaartoyda ugu xiisaha badan caalamka. Inta kale, sida ay sheegaan, hadda waa taariikh.
Nicolas Pepe Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan ' Nolosha Xiriirka
Iyadoo Nico uu ku faani karo magaciisa, su'aasha ku saabsan farriinta qof walba waa ... Waa jacayl saaxiibtiis ama WAG? Ma jirto wax diidaya xaqiiqda ah in Nico uu soo jiidanayo tayada oo uu ku jiro muuqaalkiisa qurxoon uusan isaga ka dhigi doonin geedka canabka ah ee geela.
Yaa Nicolas Pepe ee saaxiibtiis? Ku darso Raadiyaha Ghanasoccernet
Si kastaba ha ahaatee, suurtogalnimada qarsoodiga ah ee Nico waa mid ka baxsan baaritaanka isha dadweynaha si fudud sababtoo ah noloshiisa jacaylku waa mid gaar ah oo laga yaabo inuu yahay riwaayad la'aan. Wakhtiga qorista, Nicolas ayaa doorbiday inuu diiradda saaro xirfaddiisa waxaana uu doonayay in uu ka fogaado waxkasta oo ku saabsan noloshiisa gaarka ah.
Nicolas Pepe Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan ' Naftaada Shaqsiga
Helitaanka in la ogaado xaqiiqada nolosha ee Nicolas Pepe ayaa kaa caawin doonta inaad hesho sawir buuxa oo isaga ah.
Bilaabidda, isagu waa qof leh shakhsi deg deg ah. Pepe waa mid degan, wada shaqeyn iyo marwalba diyaar u ah inuu ku raaxeysto saaxiibo. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waqtiyo uu ku dhaco halis iyo feker. Kuwani waa daqiiqado markii uu ka fekerayo mustaqbalkiisa.
Ugu dambeyntii noloshiisa gaarka ah, Pepe waa qof leh dareen joogta ah oo aan waqti ku filan wax walba.
Nicolas Pepe Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan ' Nolosha Qoyska
Furaha Nico guusha waa waalidiinta daryeela iyo xubnaha qoyska. Tusaale ahaan, aabaheed ayaa wax kasta u dammaanad qaaday si mustaqbal wanaagsan loogu helo wiilkiisa.
Nicolas Pepe iyo aabihiis. Ku darso MondialSport
Ma ogeyd?… Nicolas 'dad, Celestine Pepe wuxuu ahaa ciyaaryahankii ugu fiicnaa kubada cagta ee aan maamulin xirfad ahaan. Papa Celestin ayaa go'aansaday in uu noqdo ciyaaryahan kubadda cagta ah iyada oo loo marayo wiilkiisa Nicolas. Tani waxay ahayd xilligii uu go'aansaday in uu kormeeraha xabsiga dhigo wiilkiisa yar si uu u helo xirfad. Celestin waxay shaqeysay waxayna qaadatay waqti ay ku raacdo wiilkiisa tababarka. Wuxuu aaday intii uu ku qaadanayay liisanka macalinka kubbadda cagta si uu ugu dhowaado wiilkiisa.
Maanta, waalidiinta Nicolas Pepe ayaa horay u joogsadeen faa'iidooyinka ay ku leeyihiin qoyska. Sida laga soo xigtay xisaabtanka warbaahinta bulshada, wuxuu u muuqdaa inuu xiriir wanaagsan la leeyahay hooyadiis.
Nicolas Pepe iyo hooyadiis. Lacagta IG
Pepe ma uusan kicin oo kali aheyn waalidkiis. Waxa kale oo uu leeyahay walaalo (mid ka mid ah Kwame Pepe) iyo xubno kale oo ka tirsan qoyskiisa. Pepe daacad u ah inuu hubiyo in waalidkiis uu raaxo u yahay, islamarkaana uu ku egyahay sida uu uga go'an yahay inuu ku biiro Atletico Madrid.
Nicolas Pepe, hooyadiis iyo walaalaha. Lacagta IG
Nicolas Pepe Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan ' Xaqiiqooyinka LifeStyle
Sida laga soo xigtay TransferMarket, Nicolas Pepe waa suuqa hadda qiimaha 36 Milyan Euros. Muuqaalkani wuxuu hubaal ka dhigayaa inuu yahay ciyaaryahan kubada cagta ah. Xaqiiqadani, si kastaba ha ahaatee, kama badna qaab nololeed aad u muuqda.
Nicolas Pepe waa uu ku fiican yahay inuu maamulo kubada cagta. Taas macnaheedu waa inaadan kharash gashan sida waalan, ama bedelida qaab nololeedkiisa.
Xaqiiqooyinka Hab nololeedka Nicolas Pepe. Lacagta IG
Nicolas Pepe Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan ' Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Waa maxay diinta waa Nicolas Pepe? Nicolas waa ciyaaryahan kubbadda Muslim ah, oo jecel inuu diintiisa ku muujiyo qaab ciyaareedkiisa. Wuxuu jecel yahay booqashada Dubai ee ku yaala Imaaraadka Carabta.
Nicolas Pepe oo muujinaya iimaankiisa Muslimka. Lacagta IG
Pepe ayaa xiriirka tooska ah la yeeshay ciyaartoyda isku heystayaasha ah Jonathan Bamba iyo Jonathan Ikone ayaa helay seddexda ciyaaryahan ee naaneysta "Beep beep". Ma ogeyd?… Naanaysta waa magac Faransiis ah ee Road Runner oo ka socda taxanaha Looney Tunes.
Nicolas Pepe oo ah wada-hawlgalayaasha ugu fiican-Bip Bip
Nico ayaa doorbidaya inuu ka shaqeeyo garabka isagoo bedelaya doorka aan la garaneynin ee weeraryahan dhexe siisa tababarayaasha.
Xaqiiqooyinka Nicolas Pepe - Kaalinta uu Gaaray. Ku darso 90Min
Nicolas Pepe Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan ' Soo koobista muuqaalka
Fadlan halkan hoose ka eeg, soo koobitaan video video ah ee profile this. Si wanaagsan Booqo iyo Abaalmarin inaga Youtube Channel Wixii fiidiyoow ah.
Hantida FACT: Waad ku mahadsantihiin akhrinta our Story Nicole Pepe Childhood iyo xaqiiqooyinka taariikhda loo yaqaan 'Biography'. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
Côte d'Ivoire Wareysiga Kubada Cagta